Fursadda ay heshay Kenya ma u isticmaali kartaa inay ku beegsato Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Maqaalo Fursadda ay heshay Kenya ma u isticmaali kartaa inay ku beegsato Soomaaliya?
Fursadda ay heshay Kenya ma u isticmaali kartaa inay ku beegsato Soomaaliya?
Dunida ma mooga in Kenya ay carqalad ku tahay xasilloonida siyaasadeed ee Soomaaliya. Shirkii IGAD waxaa lagu soo bandhigay inay si joogta ah ugu xadgudubto Axdiga QM iyo kan Midowga Afrika. October 2011, Kenya ciidamadeedu waxay xoog ku soo galeen gayiga Soomaaliya. Markii Golaha Amniga ee QM ku dareen AMISOM waxay muujisay dhaqan horror ah oo ilaa maanta ay cawaaqibteeda taagan tahay.
Dhaqanka Kenya ma cusba, balse sagaal sanadood kaddib December 15, 2020 in Soomaaliya ay xidhiidhkii diblomaasiyadda u jarto waxay kashiftay wajiga foosha xun ee ay ku wajahayso Muqdisho iyadoo weliba ka mid ah ciidamada AMISOM.